Ifulethi elimnandi elibekwe kwindalo entle - I-Airbnb
Ifulethi elimnandi elibekwe kwindalo entle
Indawo efanelekileyo kuwe, othanda intuthuzelo kunye nokuzola. Indlu ilula kwaye ibekwe kulwakhiwo olutsha lomgangatho we-2 - kufutshane neLyngby Sø, kwisikhululo saseLyngby og Copenhagen. Kukho ikhitshi / igumbi lokuhlala. Igumbi lokulala elinebhedi ephezulu, igumbi lokunxiba kunye negumbi lokuhlambela elikhulu elinedowutshi, iwasha kunye nesomisi. Ungaya ngqo ukusuka kwigumbi lokuhlala uye kwibalcony entle egqunyiweyo, ejonge emazantsi-ntshona. Kukho indawo yokupaka engaphantsi komhlaba eneelevator. Indawo egqibeleleyo yeshishini leholide og.
Indlu inefenitshala epheleleyo, kuba ndihlala apha, xa ungayenzi loo nto. Ifakwe nefenitshala yanamhlanje, Netflix og free wifi. Kukho isitovu se-inductions, i-dishwasher, i-microwave, ifriji enefriji.
Kuthatha nje imizuzu embalwa kwaye uya kuba seMølleådalen, Lyngby Mølle, Lyngby kanal kunye neBaadfarten. I-Baadfarten yinkonzo yephenyane epholileyo ehamba kumachibi amathathu eMntla Zealand, eLyngby Sø, eBagsværd Sø, eFuresøen naseFarum Sø.
Indawo yokuhlala ikufuphi kakhulu neDTU, NOVO og Mærsk. Kukho iikhilomitha ezisi-7 ukuya eDyrehaven enepaki endala yomxholo eDenmark, iikhilomitha ezili-12 ukuya eRådhuspladsen, kunye neekhilomitha ezingama-29 ukuya eHelsingør, apho unokuza eHelsingborg ngesikhephe. Indawo yokuhlala ikufuphi kakhulu neSorgenfri Slot, Frilandsmuseet, Marienborg (indawo yokuhlala yeNkulumbuso). Ukuba ufuna ukuya kuqubha e-Øresund, kulula kakhulu ukuya e-Bellevue i-6 yeekhilomitha, okanye e-Bagsværd Søpark 1,8 km.
Kukho iikhilomitha ezili-13 ukuya e-Rungsted havn eneMarina enkulu neyanamhlanje, kunye neMyuziyam yaseKaren Blixen. Iikhilomitha ezingama-22 ukuya eLouisana Museum of Modern Art.
Unokufika kwindawo yokuhlala, xa kunokwenzeka kuwe. Uya kufumana isitshixo kwi-keybox enekhowudi, ndiya kukuthumela ikhowudi, xa sinesivumelwano. Wamkelekile ukuba undithumele isicatshulwa okanye umyalezo, ngexesha lokuhlala kwakho kum kwigumbi elithandekayo. Kuya kuba ngcono ukuba undithumelele umyalezo ngo-Airbnb kwaye ndiza kuqhagamshelana nawe ngokukhawuleza.
Unokufika kwindawo yokuhlala, xa kunokwenzeka kuwe. Uya kufumana isitshixo kwi-keybox enekhowudi, ndiya kukuthumela ikhowudi, xa sinesivumelwano. Wamkelekile ukuba undithumele isic…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Kongens Lyngby